ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း တရုတ်- CEEC ကုန်သွယ်မှု ၅၀.၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် - Xinhua News Agency
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပတ်စ်မြို့ရှိ BILK ထောက်ပံ့သယ်ပို့စင်တာရှိ တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထားပေါ်ရှိ ကွန်တိန်နာများပေါ်မှ ကုန်စည်များအောက်ချရန် ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပ အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းရှိ နိုင်ငံများ (CEECs) အကြား ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း ၅၀.၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀.၁၃ ဘီလီယံ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
CEECs မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွင်းကုန်များမှာ ယင်းကာလအတွင်း ဒေါ်လာ ၈.၁၇ ဘီလီယံရှိခဲ့ရာ မနှစ်ကထက် ၄၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း မြှင့်တက်ခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Ren Hongbin က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လာမည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း CEECs မှ ဒေါ်လာ ၁၇၀ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသော ကုန်စည်များ တင်သွင်းရန် စီစဉ်ထားကြောင်း Ren က ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နောက်ပြန်ဆွဲနေသော်လည်း တရုတ်- CEEC ကုန်သွယ်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၁၀၃.၄၅ ဘီလီယံ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်ဘက်ကုန်သွယ်ရေးကိုလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကြား နှစ်စဉ်တိုးတက်မှု ပျမ်းမျှ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း Ren က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်-CEEC ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲကဲ့သို့ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် သွင်းကုန်များ ထပ်မံတိုးတက်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးမျှတမှုရှိစေရန် မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Ren က ဆိုသည်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တရုတ်-CEEC ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် နိုင်ငံတကာ စားသုံးသူကုန်စည်များပြပွဲအား ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း နင်းပေါမြို့တွင် ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းပြပွဲများသို့ တက်ရောက်သူဧည့်သည် ၂,၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းဝယ်ယူသူ ၆,၀၀၀ ကျော်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-05-12 23:00:21|Editor: huaxia
BEIJING, May 12 (Xinhua) — Trade between China and Central and Eastern European Countries (CEECs) jumped 50.2 percent to 30.13 billion U.S. dollars in the first quarter of 2021, an official said Wednesday.
Ren Hongbin, assistant minister of commerce, toldapress conference that China’s imports from CEECs reached 8.17 billion dollars in the period, up 44.7 percent year on year.
ထိုင်းအမျိုးသမီး ဘော်လီဘော လေ့ကျင်းရေးစင်တာတွင် COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘော်လီဘော ပြိုင်ပွဲမှု နုတ်ထွက်